Public Kura | » ६ बलमा ६ विकेट ! ६ बलमा ६ विकेट ! – Public Kura
६ बलमा ६ विकेट !
२८ चैत्र २०७८
भैरहवा – भैरहवामा जारी प्रो क्लब च्याम्पियनसिपमा मलेसियाका युवा स्टार विरनदीप सिंहले अन्तिम ओभरको ६ बलमा ६ विकेट लिएका छन् । उनले पुश स्पोर्ट्स दिल्लीसँगको खेलमा उक्त विकेट लिएका हुन् । सिद्धार्थ रंगशाला भैरहवामा विरनदीपले एक रन आउटसहित अन्तिम ६ बलमा ६ विकेट लिएका हुन् ।
विरनदीपले अन्तिम ओभरको पहिलो बल वाइड फ्याले । अर्को बलमा विरनदीप सिंहले मृगांग पाठकलाई ३९ रनमा अहमद फैजबाट क्याच गराए । दोस्रो बलमा इशान पाण्डे १९ रनमा रन आउट भए । त्यससपछि भने विरनदीपले लगातार चार विकेट लिए । विरनदीपले तेस्रो बलमा आनिडो नाहारे र चौथो बलमा विशेष सरोहलाई बोल्ड गरे ।
पाँचौं बलमा जतिन सिंघललाई कट एण्ड बोल्ड आउट गरे । अन्तिम बलमा स्पर्शलाई बोल्ड गरे । विरनदीपले ब्यक्तिगत रुपमा पाँच विकेट लिए । तर एक रन आउटसँग अन्तिम ६ बलमा ६ विकेट लिएका थिए । टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको दिल्लीले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै १ सय ३२ रन बनायो ।
मयंक गुप्ताले ३४ बलमा ४ चौका र १ छक्कासहित ३३ रन बनाए । कप्तान मृगांग पाठकले २७ बलमा २ चौका र ३ छक्कासहित सर्वाधिक ३९ रन बनाए । विरनदीपले २ ओभरमा ९ रन खर्चेर ५ विकेट लिए ।
मलेसिया पहिलो खेलमा रुपन्देही ११ सँग ६ विकेटले पराजित भएको थियो । सेमिफाइनलमा पुग्न यस खेलसँगै अन्तिम खेलमा मंगलबार पुलिसलाई पनि हराउनु पर्ने हुन्छ ।